Nsonaazụ Nchọta Ọchụchọ Google | Martech Zone
Nsonaazụ Ogologo Ọchụchọ Google Na-eweta
SEO.com ewepụtala ozi infographic na mbọ Google na-eweta nsonaazụ ọchụchọ dị elu. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ileghachi anya na isi atumatu nke Google mebere iji luso saịtị site na nsonaazụ ọchụchọ na-enweghị isi. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ọ gaghị adị ka ọ ga-emetụta gị, ọ na-eme n'ezie. Gbaa mbọ hụ na saịtị gị ma ọ bụ saịtị ndị ahịa gị na-agbaso usoro kachasị mma nke engines ọchụchọ dị oke mkpa.
Nke a bụ mmebi nke akụkọ ihe mere eme site na SEO.com post:
Nwelite Panda (Febụwarị 2011) - Google gbasiri ike na ugbo na saịtị nwere obere ogo, mkpa ma ọ bụ ọdịnaya ehichapụrụ. E lekwasịrị anya na ọdịnaya pụrụ iche na omimi ọdịnaya. Imelite ahụ metụtara ọtụtụ weebụsaịtị. Imirikiti ugbo ọdịnaya nwere nsogbu siri ike. Emeela Panda melite n'ọtụtụ nzọụkwụ n'ime afọ.
Mmelite nke Mayday (May 2010) - Google kwalitere mmelite nke lekwasịrị anya ogologo ọdụ ọdụ.
Mmelite caffeine (August 2009) - Mmelite lekwasịrị anya na akụrụngwa iji nye Google ohere ịkọwapụta ozi dị mma n'ịntanetị, ma mee ya ngwa ngwa. O nyeere nhazi miri emi aka, nke nyere Google ohere ịnye nsonaazụ ọchụchọ dị mkpa. Mmelite a mechara nye Google ohere iwebata ọsọ ọsọ dị ka ogo ogo.
Mgbakwunye Mgbakwunye (August 2006) - Mmelite lekwasịrị anya na backlinks nke Google kọrọ. Enweghị ezigbo mgbanwe na nsonaazụ njin ọchụchọ.
Nnukwu papa (February 2006) - Google lekwasịrị anya na njikọ inbound na outbound. Saịtị nwere ezigbo ntụkwasị obi na njikọ, ma ọ bụ jikọtara ya na ọtụtụ saịtị saịtị spam hụrụ ibe na-apụ n'anya ndeksi. Ebugara saịtị Spam gaa na ngalaba mgbakwunye na nsonaazụ ọchụchọ ahụ. Ndị ọrụ chọpụtara na ọbụlagodi mgbe ha gbasoro enyemaka Google na weebụsaịtị ha ka na-agbakwunye.
Mmelite Jagger (Ọktoba / Nọmba Nọvemba 2005) - Google gbara ndị ọrụ ume ka ha nye nzaghachi banyere weebụsaịtị ndị jiri okpu ojii SEO atụmatụ mee nke ọma. E wepụrụ saịtị ndị achọpụtara iji ụdị usoro a na nsonaazụ ọchụchọ ahụ. Google kpochapụrụ nsogbu canonical ma lekwasị anya na mkpa dị na njikọ njikọta.
Nweta Mmelite (Febụwarị 2005) - Nke a bụ mbọ Google mere iji chọpụta saịtị ntanetị nke ka jikwaa ọkwa dị elu na nsonaazụ ọchụchọ ahụ. Google gwara ndị ọrụ ka ha nye nzaghachi banyere saịtị ndị kwesịrị ọkwa dị elu karịa mana anabataghị ha. Ndị ọrụ mere mkpesa na saịtị ha apụ n'anya na nsonaazụ ọchụchọ yana na ụfọdụ saịtị ntanetị ka na-arụ ọrụ nke ọma.
Nwelite Bourbon (Mee 2005) - Google weputara mmelite a na nzaghachi na mkpesa spam na ntinye arịrịọ. Emejuputara mgbanwe mgbanwe na usoro iji mee ka odi ire. Mmelite ahụ lekwasịrị anya na ịkwaga site na ebe data ochie gaa na ndị ọhụrụ.
Mmelite Brandy (February 2004) - Google tinyekwuru ike na okwu dịka ntụkwasị obi, ikike na aha ọma. Mmelite gosipụtara na ịnye ozi dị mkpa bụ isi. Enwere mkpa dị ukwuu karịa na ọdịnaya ọdịnaya na weebụsaịtị. Google kwusiri ike na mkpa nke Indexing Latantic Semantic.
Nwelite Austin (Jenụwarị 2004) - Mmelite a lekwasịrị anya na omume a na-akpọ bọmbụ Google, ebe ndị mmadụ na-ejikwa usoro ahụ rụpụta nsonaazụ na-eduhie. E lekwasịrị anya na saịtị na obere mkpokọta isiokwu yana ezigbo njikọta dị n'ime. Enyere njikọ ndị metụtara mkpa karịa na saịtị ndị ahụ metụtara saịtị ndị ọzọ na ụlọ ọrụ yiri nke ahụ ka mma na nsonaazụ ọchụchọ ahụ.
Mmelite Florida (Nọvemba 2003) - Mmelite ahụ gosipụtara ngbanwe Google site na nzacha dị mfe iji gbalịa ịghọta akụkụ nke ọchụchọ na nsonaazụ ọchụchọ nwere. Mmelite ahụ kpochapụrụ spam na njikọ dị mfe na atụmatụ ndị ọzọ nke nyekwuru ibu maka saịtị kachasị nke ọma na nke ọma. Webmasters nabatara mmelite ahụ wee gosipụta na Google na-ebute ọdịmma nke ndị na-achọ ya ụzọ. Mmelite ahụ bụ nnwale iji gbaa ebe nrụọrụ weebụ na-acha ọcha okpu, bụ nke gbasoro iwu chọrọ.
Melite Esmerelda (June 2003) - Nke atọ na usoro nke mmelite nyere mmasị na peeji nke nyere nkọwa doro anya na onye ọbịa. Mmelite ahụ gosipụtara na ibe dị n'ime ebe nrụọrụ weebụ nwere ike inwe mkpa ka mma maka mmelite Dominic, nke yiri ka ọ na-enye mmasị na homepage na ọbụna nyocha ndị ezubere maka otu ajụjụ. Ndị ọrụ kwuru na spam dị obere karịa mgbe Dominic na Cassandra mmelite.
Nchịkwa Dominic (Mee 2003) - A na - akpọ aha mmelite a mgbe ụlọ nri Pizza dị na Boston nke ndị bịara PubCon na - eleta ya. Mmelite ahụ lekwasịrị anya na-eme usoro usoro ọchụchọ dabere, ma jikọta ebe data na otu ọchụchọ. Mmelite ahụ mere ka o doo anya na ụlọ ọrụ data ọ bụla bu n’obi ime ihe dị iche iche.
Mmelite Cassandra (Eprel 2003) - Mmelite a lekwasịrị anya na ngalaba aha mkpa. Echiche bụ na ụlọ ọrụ kwesịrị ịhọrọ aha na-egosipụta aha ngalaba ha.
Nwelite Boston (Machị 2003) - Nwelite Boston lekwasịrị anya na njikọ na-abata na ọdịnaya pụrụ iche. Ihe si na ya pụta bụ na ọtụtụ webmasters gosipụtara ọdịda na backlinks na nnabata kwekọrọ na PageRank.